TAP Air Portugal na-ebupụta ụgbọ elu ọhụrụ na-enweghị nkwụsị site na US gaa Azores
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » TAP Air Portugal na-ebupụta ụgbọ elu ọhụrụ na-enweghị nkwụsị site na US gaa Azores
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụgbọ elu na ụwa na-ebelata usoro ụgbọ elu ha, TAP Ikuku Portugal ka gbakwụnyere ụzọ ọhụrụ si Boston gaa Ponta Delgada, naanị ụgbọelu ahụ akwụsịghị Azores si USA.
Ọ bụ ezie na Europe ka nọchiri emechi nye ndị ọbịa US ndị na-anaghị agagharị na azụmaahịa dị mkpa ma ọ bụ zute ndị ọzọ, ndị Portuguese-America nwere ike ịga Portugal, ọtụtụ na-esokwa akụkọ ezinụlọ ha laghachi na Azores.
TAP ga-arụ ọrụ ọhụụ ụzọ ugboro atọ n'izu ọ bụla n'iji ụgbọ elu ọhụụ ọhụrụ Airbus A321LR, ya na klaasị azụmaahịa, klasị akụnụba na EconomyXtra. Thegbọ elu ahụ malitere Ponta Delgada ụnyaahụ na 3: 40 pm, na-agbadata n'isi ụtụtụ na ọdụ ụgbọ elu Boston Logan na mgbede ụnyaahụ na 4: 56 pm, nkeji 24 tupu oge nhazi 5: 20 pm Flightgbọ njem mbụ na-apụ apụ Logan na nkeji ole na ole tupu elekere anya 10:30 nke mgbede ga-apụ, na-abata n'ụtụtụ a na Ponta Delgada na 7: 25am.
Ka ọ na-erule ngwụcha ọnwa Julaị, TAP na-enye ndị ahịa mmesi obi ike nke mmemme "Akwụkwọ nwere ntụkwasị obi", iji kwado ndị njem si US bụ ndị na-ejighị n'aka maka ịdebanye ụgbọ elu maka ọnwa ole na ole sochirinụ. TAP ga-enyeghachi akwụkwọ ntinye akwụkwọ maka tiketi ọhụrụ edere na July 1-31, maka njem site na Ọktọba 31, yana mgbanwe achọrọ ụbọchị 21 tupu ọpụpụ. (Gbanwee ego gbanwere ma ụgwọ ọ bụla dị iche ka dị.)
Carlos Paneiro, TAP Air Portugal's VP, Sales, kwuru na “Ọ bụ ihe ùgwù dị ụkọ inwe ike iwebata ụzọ ọhụụ n’oge nsogbu dị otu a maka ụlọ ọrụ ụgbọ elu, na njem zuru ụwa ọnụ n’ozuzu ya. "Ndị Azores abụkarị ndị ama ama na ndị America Portuguese, ọkachasị n'oge ọkọchị, yabụ anyị nwere obi uto na anyị nwere ike ị nweta ụgbọ elu na-akwụsịghị akwụsị yana nhọrọ nkwụsị nke Lisbon anyị."
Ed Freni, Massport Aviation Director kwuru, sị, "Mkpakọrịta anyị na ndị ụgbọ elu dịka TAP dị mkpa iji hụ na ndị mmadụ rutere ebe ha ga-aga n'oge a pụrụ iche." “Idobe ndị njem na ndị ọrụ anyị nchekwa na ahụike bụ nọmba 1 anyị kacha mkpa. Anyị na-akwado ndị njem mba dị iche iche ka ha tinye ihe nkpuchi, soro ntuziaka na-elekọta mmadụ, na ịpụpụ iche maka ụbọchị 14 mgbe ha rutere na Boston.
“Ọ bụ ihe magburu onwe ya ịnwe TAP na-efe efe na Azores na-adịghị akwụsị site na USA, Luís Capdeville Botelho, Onye isi oche na Gaa Azores kwuru. "Anyị na-atụ anya ịnabataghachi ndị ọbịa US na ụlọ anyị mara mma n'oge na-adịghị anya."
TAP na-ejekwa ozi Lisbon site na Boston yabụ ndị njem US ga-enwe ike iji ụgbọ elu ma kwụsị na Azores ma ọ bụ tinye nkwụsị na Lisbon na njem ọ bụla.